Ganacsato Turkish ah oo Suuq Weyn ka dhisayo Magaalada Muqdisho
Updated About:262 days ago 5
Mashruuc ay ku bixi doonto lacag dhan $500 million ayey ganacsato Turki ah ah uga dhisi doonaan magaalada Muqdisho Suuq Weyn oo loo bixiyey İstanbul Bazaar.
Erayga Bazaar micnahiisu waa suuq weyn oo ganacsi, dalalka Islaamka iyo Carabta ayuu markiisi hore kasoo bilowday meelaha qaarna aduunka waxaa looga yaqaano suuqa wax kala badalashada, Soomaaliya waligiis lagama sameyn balse hada ayey rajeyneysaa in ay hesho iyadoona albaabada loo furi doono sanadka 2013-a.
Turkiga oo door weyn ka ciyaarayo koboca dhaqaalaha Africa ayaa ku lug lahaa sanadihi lasoo dhaafay ganacsiga, wax soo saarka, maal gelinta iyo warshadeynta Qaarada Africa, mashaariicdaasi mid ka mid ahna mashruuca Muqdisho loogaga dhisayo Xarunta Ganacsiga ee Istanbul Bazaar.
Mashruucaan waxaa iska kaashanaya midowga ganacsatada Turkiga, waxaase qorshahan soo alifay oo hogaankana u haya ganacsade caan ah oo Turki ah kaasi oo lagu magacaabo Mustafa Erkan.
Mustafa Erken oo kasoo jeedo magaalada Istanbul hada waxa uu ku suganyahay magaalada Muqdisho isaga oo diyaarinayo, waxaana uu xaruntan suuqa ganacsiga ah uu doonayaa in laga sameeyo dhul cabirkiisu uu dhanyahay 50 kun oo mitir square ah, waxa ayna isku jiraan Xarunta oo 45 ku fariisan doonto, hotel nooci ugu danbeeyey oo caalamka ah, adeegyo kala duwan.
Waxaa kale oo uu qaban doonaa Istanbul Bazaar, isaga oo dalkeeni keeni doona alaabta kala duwan ee guryhaha ku xafiisyada, fadhiyada, jiifka iyo dhamaan wixii la xiriira qalabka furniture-ka roogaga iyo raashinka qalalan.
Sida uu sheegay ganacsadahan, mashruuca waxaa ku biri $500 million oo ay iska kaashan doonaan koox ganacsato Turkish ah kuwaas oo doonaya in ay keenaan alaabaha ay dibada u dhoofiyaan Soomaaliya si ay halkaan suuq ugu nqoto, waxaase ay rabaan in ay ka helaan faa,iido dhan laba bilyan.
Mr. Erken oo ka sheekeynaya ganacsiga sida ay u yaqaanaan ganacsiga Qaarada Africa ayaa sheegay in ay waaya aragnimo badan ka heystaan howshi ay ka qabteen dalka South Africa dhowrki sano ee lasoo dhaafay, sidaasi daraadeedna uu ku hanweynyahay in Somalia ay ka wanaagsantahay dalal badan oo qaarada ah.
Wuxuu sheegay in qeyraadka dabiiciga ah ee yaala Soomaaliya ay u sahleyso in howshooda ay noqon doono mid fudud isla markaana ay soo saari doonaan wax soo saar macquul iyo sameynta warshado yar.
Meelaha ay abaari doonaan ayuu farta ku fiiqay in ay noqon doontaan Warshadaha Shamiintada iyo kuwa biraha oo uu sheegay in Soomaaliya ay uga yimaadaan dibada, isaga oo muujinaya in ay rabaan in ganacsatada ku xiran China ay alaabaha ka iibsadaan Turkiga ayuu sheegay in alaabaha Somaliya kaga yimaada China ay tayadoodu aad u hooseyo halka qalabka iyo raashinka laga keeno Dubai uu aad qaali u yahay, balse uu rajeynayo in dhamaan waxaasi ay dabooli doonaan.
İstanbul Bazaar waxaa uu wax weyn ka badli doonaa dhaqaalaha dalka oo aad u hooseeya, sidoo kalana shaqo la,aanta dalka ayuu hoos u dhigi doonaa gaar ahaan mashruuca oo laga hir gelin doono magaalada Muqdisho waxa shaqaalaha intiisa badan ay noqon doonaan dadka deegaanka.
Maamulaha guud ee Istanbul Bazaar Erkam Meriç ayaa sheegay in ay raaci doonaan talaabadi wanaagsaneyd ee ganacsi ee ka dhaxeeyey Soomaaliya iyo Dowladii Cusmaaniyiinta ee Turkiga qarniyadii 16-aad iyo 17-aad, isla markaana ay haatan dib usoo nooleyn doonaan waqtigaasi.
Turkiga ayaa sanadki hore door ka ciyaaray gargaarki bani,aadanimo ee dalka abaarihi ka dhacay Soomaaliya, waxay bixiyeen deeqo kala duwan oo xaga waxbarashada oo ay siiyeen dhalinyaro iyo caruur Soomaaliyeed.
Bishii August 19-dii 2011 waxaa Muqdisho soo booqday Ra’isulwasaraha Turkiga iyo qoyskiisa, wasiirada qaar iyo qoysaskooda si ay ugu soo jeediyaan indhaha caalamka dalka Soomaaliya.
Turkiga sidoo kale wuxuu Soomaaliya ka furtay safaarad bishi November iyada oo shaqadeeda bilowday bishi March, waxa kale oo jirta in duulimaad caalami ah ay ka bilowday diyaarada Turkish Airlines magaalada Muqdisho marki ugu horeysay.
mahdi says:	December 11, 2012 at 1:18 pm	war ishan bukta ee baas waayo wanba garan la ahayee hadad donto waxaad ugala jedaa dad somaliyeed war isku xishood halkad dadka somalida ah isu soo dhawayn lahayd ayaad il bukta iyo mid fiyow ka sheekaynaysaa ?
Reply	natah says:	September 26, 2012 at 11:31 pm	ishi buktay ku bikaacso
Reply	cabdi says:	September 8, 2012 at 12:05 pm	guul guul guul guul walaahi aad baan ugu farxay dawladda turkishna waxaan leeyahay7 guulaysta somalia wax badan ayaad tartay
Reply	Maxamed says:	September 7, 2012 at 7:30 am	Very interesting
Reply	natah says:	September 26, 2012 at 11:32 pm	ishi bukutay ku bikaacso